Thursday, April 20, 2017 Khamiista, Sebtember 24, 2020 Douglas Karr
Waxaan ku xayeysiin jirnay bartayada inaan ka helnay macaamiis ka badan 75,000 liiska email-keena. In kasta oo ay taasi run ahayd, haddana waxaannu la kulannay arrimo la xidhiidha samatabbixinno dhib badan oo aannu ku xannibnay fayllada spam wax badan. Inkasta oo macaamiisha 75,000 ay u muuqdaan kuwo aad u fiican markaad raadineyso kafaala-qaadayaasha emaylka, waa wax aad u xun markii xirfadlayaasha emailka ay kuu sheegaan inaysan helin emailkaaga maxaa yeelay waxay ku xayirneyd galka qashinka. Waa bar yaab leh in
Kordhi Email CTRs ee Wadaagista Bulshada
Isniin, Oktoobar 28, 2013 Douglas Karr
GetResponse waxay isku dubariday xog uruurin guud oo ku saabsan saameynta guud ee wadaagga bulshada ee sicirka gujinta-e-maylka… natiijooyinkuna aad ayey u muuqdaan. Tirada isticmaaleyaasha ee ay ku jiraan badhannada wadaagga bulshada ee emayladooda ayaa ka kordhay 18.3% illaa 29.4%. Marka loo eego natiijooyinka sanadkii hore, taasi waa koror ah 61%. Waxa xitaa ka sii yaab badan waa natiijooyinka waxqabadka aan caadiga ahayn ee sare ee joornaalada ay ku jiraan badhamada wadaagista bulshada. E-maylladaas waxay lahaayeen celcelis gujin-ilaa-qiime (CTR) 158%